စံပီး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / စံပီး
Category Archives: စံပီး
စံပီးရဲ့ ဓမ္မသီချင်းခွေသစ်လေးပါ သီချင်းတွေကတော့ ကောင်းတယ် ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ သီချင်းအယ်(လ်)ဘမ် Scan မလုပ်ရသေးလို့နောက်မှဘဲတင်ပေးတော့မယ် လိုချင်တဲ့သူများ အောက်ကလင့်လေးမှာ ဆွဲသွားကြပါ comment ပေးခဲ့ကြပါဦး
September 17, 2010 khai အဆိုတော် (ကျား) စံပီး New Myanmar Albums gospel album 30 Comments
“အချစ်ကိုလျှော့မတွက်နဲ့” ဇာတ်ဝင်တေး – L ဆိုင်းဇီ
သီးသန့်ဖြစ်တည်မှု – L ဆိုင်းဇီ တေးရေး – စံပီး ဒီသီချင်းလေးက “ အချစ်ကိုလျှော့မတွက်နဲ့ ” ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်တေး လေးပါ။ သီချင်းလေးက နားထောင်လို့ကောင်းတယ်.. အဲဒါကြောင့် MMA မှသူငယ်ချင်းများ နားထောင်ဖို့ share ပေးလိုက်ပါတယ်…
June 8, 2010 Nge အဆိုတော် (မ) စံပီး ဇာတ်ဝင်သီချင်းများ Lဆိုင်းဇီ Myanmar Artist4Comments
၁ – မေမေ – ဘိုဖြူ ၂ – မေမေ့ မေတ္တာ – ကမ် ၃ – မျက်ရည် – စံပီး ၄ – ချမ်းမြေ့ပါစေ – ဖိုးကာ ၅ – မိဘမဲ့ ငရဲခန်း – ချောစုခင် ၆ – အမေ့ရဲ့ အချစ် – ကာကာ ၇ – ပြုံးလိုက်ပါ မေမေ – စောဝင်းလွင် ၈ – မေမေ (၂) – ချမ်းချမ်း ၉ – အပြန်ခရီး – အောင်ပဏ်း ၁၀ – နောက်ဆုံးဂတိ – ဂရေဟမ်
June 5, 2010 MMA ဘိုဖြူ ဖိုးကာ အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) စံပီး ဂရေဟမ် ချောစုခင် ကာကာ ချမ်းချမ်း Myanmar Artist 1 Comment
May 3, 2010 PTL စံပီး Media Gospel Songs 1 Comment
Myanmar Gospel Album အဟောင်းလေးပါ…. နားထောင်ကြည့်ပါလား…. comment ပေးခဲ့ပါဦး…
March 27, 2010 khai အခွေ (အများ) စံပီး ရိန်းမိုး ရတနာဦး ဆုန်သင်းပါရ် ချောစုခင် ခရစ်တိုဖာ မီးမီးခဲ Lလွန်းဝါ gospel album6Comments
Myanmar Gospel Album အဟောင်းလေးပါ..
March 27, 2010 khai အခွေ (အများ) စံပီး ရတနာဦး ချောစုခင် ကဗျာဘွဲ့မှုး မီးမီးခဲ မျိုးကြီး gospel album3Comments
Myanmar Gospel Album အဟောင်းလေးပါဘဲ… ကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်…
March 20, 2010 khai အခွေ (အများ) စံပီး ရိန်းမိုး ရတနာဦး ဆုန်သင်းပါရ် လေးဖြူ ကဗျာဘွဲ့မှုး ချစ်စမ်းမောင် မီးမီးခဲ မျိုးကြီး gospel album6Comments
February 28, 2010 khai အခွေ (အများ) စံပီး ထွဏ်းထွဏ်း ရတနာဦး ဆုန်သင်းပါရ် မျိုးကြီး Myanmar Artist gospel album2Comments
သီချင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ MMA မှာမတွေ့မိသေးတဲ့အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…ှ၁။ မျှော်လင့်ခြင်းရောင်ခြည်(ရိန်မိုး၊စံပီး၊Lဇော်)
September 14, 2009 hteiksan စံပီး ရိန်းမိုး Myanmar Artist ရိန်မိုး/စံပီး/Lဇော်4Comments